Qaramada Midoobay oo yaraynaysa joogitaanka shaqaaleheeda ee Muqdisho | Somaliland Mirror
Home WARARKA Qaramada Midoobay oo yaraynaysa joogitaanka shaqaaleheeda ee Muqdisho
Qaramada Midoobay oo yaraynaysa joogitaanka shaqaaleheeda ee Muqdisho
Qaramada Midoobay ayaa yaraynaysa joogitaanka shaqaalaheeda ee magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaalida.
arrintan ayaa sabab looga dhigay weerarkii hoobiyaasha ee kowdii January lagu qaaday xarunta QM ee Muqdisho, oo ku dhex-taalla xarunta Xalane, ee ay degan yihiin inta badan ajaanibka ku sugan Soomaaliya.
Weerarkaas ayaa waxaa lagu dhaawacay saddex ka mid ah shaqaalaha Qaramada Midoobay.
Ma cadda inta uu soconayo go’aanka kasoo baxay QM, waxaana uu kusoo aaday xilli ay xiisad ka dhex oogan tahay QM iyo dowladda Somalia, kadib markii Somalia ay caydhisay wakiilkii QM ee Soomaaliya, Nicholas Haysom
Previous PostAkhriso: Liiskii kama dambayska ahaa ee Magacyada musharaxiinta xilka madaxweynaha iyo ku xigeenka Puntland oo la shaaciyey. Next PostMadaxweynaha Somaliland Oo Xafiiskiisa Ku Qaabiley Wasiirka Difaaca Dawladda Ingiriiska